Zawgyi Archives - Page 16 of 17 - Saturngod
Posted on Updated April 22, 2009 April 22, 2009 by saturngod
အကြမ်းတော့ ပြီးသွားပြီ။ မလိုအပ်တာတွေဖြည် လိုအပ်တာတွေ ပြန်ပေါင်းဖို့ လိုသေးတယ်။ pattern ကတော့ ၈၄ ခုရှိတယ်။ normalization လည်းပြီး syllable break လည်းအပြီးပေါ့။ ၈၄ ခုထက် နည်းသွားဖို့ အလားအလာတေရွှိတယ်။ လက်ရှိက နဲ့လုပ်ထားတယ်။ 0width space ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေပြီ ထင်တာပဲ။ ပြီးရင်တော့ အရင်ဆုံး ကိုယ့် blog ကို ကိုယ် စမ်းပြီး သုံးကြည့်ရမယ်။ အဲ… local မှာပဲ စမ်းမှာနော်။ ပြီးရင်တော့ plugin လေးရေးကြည့်အုံးမှပဲ…. http://www.ornagai.com/zgnor/index.php | တွေကို0width space နဲ့ အစားထိုးလိုက်ပေါ့။ အခု post မှာ0width space […]
Zawgyi syllable breaking
Posted on Updated April 22, 2009 by saturngod
အခုတလော breaking တွေလုပ်ရတာ မူးနောက်နေတာပဲ။ ကိုစိုးမင်းကိုတော့ တော်တော်လေး လေးစားတယ်။ သူလုပ်ထားတာ တော်တော်လေးမြန်တယ်။ နောက်ပြီး မှန်လည်းမှန်တယ်။ ခက်တာက PHP နဲ့တွဲသုံးလို့မရတာပဲ။ နောက်ပြီးတော့ PHP library ကလည်း ကိုယ်ပိုင် server မှ အဆင်ပြေမှာဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် PHP နဲ့ရေးလိုက်တာ။ normalize က လွယ်တယ်။ syllable breaking က ထင်တာထက် ပိုခက်တယ်။ ဘုန်းကြီးဝတ်နေတုန်းက လက်နဲ့ အကြမ်းချရေးခဲ့ပြီးပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ထင်သလိုမရဘူး။ အများကြီးပြန်ပြင်ရတယ်။ ရတဲ့ပုံစံနဲ့ ရေးရတယ်။ အခုတော့ pattern ပေါင်း ၇၅ ခုရှိနေပြီ။ အခုက အကြမ်းအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။ အချောသတ်ရအုံးမယ်။ အဲဒီ breaking လေးရရင် ornagai မှာ မြန်မာစာ […]
Zawgyi DEB For Ubuntu
Posted on Updated July 14, 2009 March 30, 2009 by saturngod
အခု အသစ်ပြန်ပြင်ထားတယ်။ အရင်က version မှာ install.sh မှာ ရေးထားတာလေးတွေ လွဲနေတာတွေ ပြင်ထားတယ်။ Ctrl + Shift နဲ့ ပြောင်းလို့ရတယ်။ third level ကတော့ Right Ctrl + Key ပဲထားထားတယ်။ keyboard ပြသနာကိုလည်း ပြန်ရှင်းထားတယ်။ သွင်းပုံကလည်း လွယ်ပါတယ်။ download ချ။ ပြီးရင် Zawgyi.tar.gz ကို right click လုပ်ပြီး extract လုပ်။ Application -> Terminal မှာ $ cd ~/Desktop/Zawgyi $ ./install.sh ဒါဆိုရင် ရပါပြီ။ ပြီးရင် Panel မှာ right click နှိပ်။ […]
Zawgyi IS NOT EQUAL TO MyMyanmar
Posted on Updated March 9, 2009 March 9, 2009 by saturngod
မနေ့က OC ပွဲမှာ အသိတစ်ယောက်က ဇော်ဂျီက မိုင်မြန်မာကို ရောင်းလိုက်တာ ဟုတ်လားတဲ့… အစကတော့ နည်းနည်းကြောင်သွားတယ်… ပြီးတော့ သူက ဆက်ပြောတယ်… Computer Journal မှာ ပါတယ်လေဆိုတော့… ဟာ..မဟုတ်ပါဘူးဗျာ… ဇော်ဂျီက ရောင်းတာ မှမဟုတ်တာ… လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ လည်းမပေးပါဘူးဗျာ.. ဇော်ဂျီက ကျွန်တော် သိသလောက်တော့ မည်သူ မဆို လွှတ်လပ်စွာ သုံးစွဲနိုင်သည်။ မည်သူ မဆို လွှတ်လပ်စွာ မိမိ၏ product များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတော့ ရောင်းတာတော့ ဇော်ဂျီဘက်က မကြားမိပါဘူ…. ဒါနဲ့ alpha က ကိုရဲမြတ်သူ နဲ့ ဖုန်းပြောတော့ မေးလိုက်တော့… မရောင်းပါဘူးတဲ့…
Web Text Service For WordPress
Posted on Updated March 6, 2009 March 6, 2009 by saturngod
ဒီနေ့တော့ web text service ကို wordpress အတွက်လုပ်ထားတာလေး တင်လိုက်တယ်။ http://www.mysteryzillion.org/webtext/wordpress_webtext.zip အဲဒီ zip file ကိုဖြည်လိုက်.. wordpress folder ထဲက addform.php ကို yourdomain.com/ သို့မဟုတ် blog ရဲ့အောက်မှာပေါ့… ကျွန်တော်ဆို saturngod.net ဖြစ်တဲ့အတွက် saturngod.net/addform.php ဆိုပြီး ခေါ်လို့မှာပေါ့… နောက်ထပ် အဆင့်အနေနဲ့ကတော့ Admin -> Apparance -> Editor -> comment.php မှာ <input id=”submit” class=”button” name=”submit” type=”submit” value=”Submit Comment” tabindex=”5″ /> ကိုရှာ ပြီးရင် အဲဒီ အောက်မှာ <input onclick=”window.open(‘http://www.mysteryzillion.org/webtext/webtext.php?url=’ + escape(document.location.href),’WebTextEdtior’,’resizable=yes,width=1200,height=500′)” […]
Posted on Updated March 4, 2009 by saturngod
ornagai.com အတွက် သီးသန့် blog လေးတစ်ခုလုပ်ရမယ်။ ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်။ ဘာတွေ download ချလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပေါ့။ နောက်ပြီး webservice ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာရယ်။ firefox opensearch နဲ့တွဲပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ chrome မှာ opensearch ဘယ်လို သုံးရမလဲဆိုတာ။ စတာလေးတွေ လုပ်ရအုံးမယ်။ နောက်ပြီး အားရင် ဇော်ဂျီသီးသန့် site လေးတစ်ခုဆောက်အုံးမယ်။ ဇော်ဂျီ information တွေကြီးပဲပေါ့။ နောက်ပြီးရင်တော့ web text editor အသစ်လုပ်နေတာ။ web service ပုံစံပေါ့။ ဘယ်သူမဆို ယူသုံးလို့ရအောင်လေ။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ wordpress blog ရဲ့ comment နေရာမှာ အသစ်တွေ ထည့်မနေတော့ဘူး။ အဲဒီ webtext editor လေးပွင့်လာမယ်။ အဲမှာရိုက်။ […]
Change Keyboard Icon in Windows
Posted on Updated February 17, 2009 by saturngod
http://bashroan.blogspot.com/2009/02/language-bar-zawgyi-icon.html မှာရေးထားတာပါ။ blogspot ကို ကျော်ရခက်တဲ့ လူတွေအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted on Updated July 14, 2009 February 16, 2009 by saturngod
zawgyi.tar.gz ကိုဖြည်ချလိုက်။ ပြီးရင် terminal ကနေ ဖြည်ချထားတဲ့ ပတ်လမ်းကြောင်းကိုသွားလိုက်။ပြီးတာနဲ့ $./install.sh လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ keyboard သွင်းပေးသွားတယ်။ တစ်ခါတည်း Left Alt ဆိုရင် keyboard change ပြီးတော့ Right Ctrl ဆိုရင် thrid level key ပြောင်းပေးတယ်။ –္စ လိုမျိုးရိုက်ချင်ရင် r-ctrl+p နှိပ်လိုက်ရုံပဲလေ။ Download Here